Qarax qasaaro dhaliyay oo ka dhacay degmada Hodan | KEYDMEDIA ENGLISH
Qarax qasaaro dhaliyay oo ka dhacay degmada Hodan
Aagga qaraxu ka dhacay, ayaa aad ugu dhow, is-goyska Shineemo Nasri, oo ay ku sugan yihiin ciidan ka tirsan booliska gaarga ah ee Haramcad, kuwaasoo si joogto ah baaritaanno u sameeya, qaraxaan ayaase muujinaya dayacaad.
MUQDISHO, Soomaaliya – Qarax loo adeegsaday miinada nuuca dhulka lagu aaso ah ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho, gaar ahaa, agagaarka Is-goska Banaadir, ama jidka Digfeer, ka soo hor jeedka Isbitaal Kalkaal ee degmada Hodan.
Qaraxa ayaa lala eegtay, General Maxamed Xaashi Guuleed oo Kamid ah Saraakiisha Militirga Soomaaliya, kaasoo uu soo gaaray dhaawac, halka ay geeriyoodeen qaar ka mid ah ilaaladiisa iyo dad shacab ah oo goobta ka ag dhawaa.
Ugu yaraan shan qof ayaa geeriyootay qaraxa, halka tiro kalana ku dhaawacantay, sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah, waxuuna sarkaalka la bartilmaameed-saday ka soo baxay xarunta Villa Beydhabo oo goobta ka dhow.
Ma jiro, wax war ah oo ilaa hadda ka soo baxay, laamaha amniga, oo ku addan qasaaraha rasmiga ah ee Qaraxa, xilli maalinba maalinta kasii danbeysa uu sii xumaanayo amniga caasimada, iyadoo lagu jiro xilli doorasho.
Labo habeen ka hor ayay ahayd, markii dabley hubeysan weerar qarax is miidaamin ah ku billowday ku qaadday, Huteel lagu magacaabo Pescatore, oo ku yaalla xeebta Liido ee magaalada Muqdisho oo ay ka afurayeen Xildhibaanno.
Kooxda xiriirka la leh Al-qaacida ee Al-Shabaab, ayaa falalkooda amni darro sare u qaada bisha Ramadan, gaar ahaan 10-ka danbe, sidoo kale beegsigooda ayay xoojiyaan xlliyada doorashada, mana muuqdo dalaal looga hor tagayo.
Xildhibaannada Baarlamaanka 11-aad ayaa Xaruntooda oo ku taallaa Madaxtooyada Soomaaliya, uga guuraya amni darro, kadib markii dhawaan Villa Hargeysa lagu garaacay madaafiic laga soo tuuray wax ka yar 500 oo mitir.